Toerana hotsidihina any Torkia - ALinks
mandehandeha sy miaina na aiza na aiza ho an'ny rehetra
Toerana hotsidihina any Torkia
Enga anie 20, 2022 Shubham Sharma zavatra atao, vorontsiloza
Ny toerana tsara indrindra hitsidihana vorontsiloza dia Istanbul, Efesosy, Bodrum ary Kapadokia. Torkia dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hitsidihana. Manana ny fototry ny tantara fahiny miaraka amin'ny zavakanto tsara tarehy izy io. Ity ny lisitr'ireo toerana ambony izay tsy azonao tsinontsinoavina raha jerena ao Tiorkia.
Toerana hotsidihina any turkey
Ity ny lisitr'ireo toerana ambony izay tsy azonao tsinontsinoavina raha jerena ao Tiorkia.
I Istanbul dia tanàna lehibe any Torkia. Ary koa, Istanbul dia malaza eran-tany noho ny tantarany sy ny kolontsainy manankarena. Ankoatra izany, manana toerana mahatalanjona izy io, rafitra tsara tarehy, ary endrika maro be. Istanbul no tanàna lehibe indrindra any Torkia ary iray amin'ireo lehibe indrindra eran-tany. Mamakivaky lalana tery mampitohy an'i Azia sy Eoropa i Istanbul. Ankoatra izany, io no hany tanàna eran-tany manerana ny kontinanta roa. Tsy isalasalana fa i Istanbul dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hitsidihana an'i Torkia. Izy io dia manana maritrano mahavariana, toerana manan-tantara, fisakafoanana, fiantsenana, fiainana alina, ary rivo-piainana hafahafa. Ary koa, manan-tantara toa ny Hagia Sophia, Blue Mosque ary Topkapi Palace no toerana tsara indrindra hitsidihana eto.
Te-hipetraka lalitra eny an-tampony amin'ny balaonina mafana miloko lehibe ve ianao? Raha eny, i Kapadokia no toerana mety aminao. Tsy ny balaonina mafana ihany no malaza amin'ny fiforonan'ny vatolampy sy ny tontolony ihany koa ny tanàna. Raha any Torkia ianao amin'ny tanjona rehetra dia tsy maintsy mitsidika ny toerana tsara tarehy indrindra any Tukey ianao. Ny Cappadocia dia ao amin'ny Central Anatolia, Cappadocia. Ary koa, malaza amin'ny tontolon'ny angano, ny setroka, ny cones ary ny tendrony ny tanàna. Ny fipoahan'ny volkano sy ny fihoaram-pefy no nahatonga ny fiforonan'ireo faritra ireo.
Ny Efesosy dia toerana tranainy any Aegean Torkia. Malaza amin’ny Tempolin’i Artemisy i Efesosy. Afaka manimbolo ny tantaran'ny Empira Romana ianao amin'ity toerana ity. Voaresaka ao amin’ny lisitry ny zava-mahatalanjona fito teo amin’ny Tontolo Fahiny koa izy io. Iray amin'ireo toerana mety indrindra ho an'ny olona tia ny toerana arkeolojika. Ao koa ny Tempolin'i Hadrian sy ny Tranomboky Celsus mahafinaritra. Trano misy rihana roa ny Tranomboky Celsus.
Bodrum dia ao amin'ny faritra atsimon'i Aegean any Torkia. Izy io dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona fito amin'ny Tontolo Fahiny. Ankoatra izany, misy tora-pasika tsara tarehy eo amin'ny ilany atsinanan'i Bodrum. Maro ny mpizaha tany no nilaza fa ny tora-pasika dia manana rano manga mamirapiratra izay tsy azonao adino. Afaka mahita trano fisotroana kafe, trano fisotroana, ary toeram-pandihizana eo akaikin'ny tora-pasika. Bodrum dia fantatra ihany koa amin'ny hoe Halicarnassus izay renivohitr'i Caria. Toerana nahaterahan’i Hérodote io toerana io. Raha mitsidika an'i Bodrum ianao dia tsy maintsy mahita ny Castle of St. Peter, fantatra amin'ny anarana hoe Bodrum Castle.
Ny moske tsara tarehy, miaraka amin'ny domes sy ny loko manga, dia manana fikitihana miavaka amin'ny antsipiriany.
Iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any Torkia ny Blue Mosque of Istanbul. Ny endrika manga manjelanjelatra an'ny moskea dia sary tonga lafatra. Afaka mitsidika ny moske (na lahy na vavy) ny mpitsidika.
Marihina fa mikatona in-dimy isan'andro ny moske ho an'ny fivavahana. Noho izany, ataovy ny drafitry ny fitsidihanao alohan'ny fotoam-bavaka.
Ankoatra izany, tsy maintsy manaraka ny fitsipiky ny fitafian'ny moske ianao. Ny vehivavy dia tsy maintsy manarona ny lohany sy ny tongony, fa ny lehilahy koa dia tsy maintsy miakanjo tsara.
Museum Arkeolojika Istanbul
Tsidiho ny tranombakoka voalohany ao Tiorkia. Natao tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ity tranombakoka arkeolojika ity any Istanbul.
Ity misy fanangonana ara-tantara lehibe momba ny vola madinika sy fitaovam-piadiana Mezopotamia.
Aza adino ny mitsidika ny Alexander Sarcophagus sy ny Tabnit Sarcophagus. Ny sisa tavela amin'ny tempolin'i Athéna sy ny fampisehoana Troy dia zavatra roa hafa mahafinaritra hojerena. Ny Kiosk Tiled dia manana ny anjarany manokana, miaraka amin'ny fampirantiana miloko marevaka.
Tsy adino ny mandehandeha manodidina ny araben'ny bazary ao Istanbul. Iray amin'ireo tsena tranainy sy lehibe indrindra ao an-tanàna ny Grand Bazaar. Miantso ny sainao ny mpivarotra rehefa mampiseho vokatra Tiorka nentim-paharazana.
Ny fanangonana Bazaar dia hanintona ny mpividy sy ny mpanao haingon-trano. Toerana tsara ahazoana fahatsiarovana tiorka ho an'ny fianakaviana sy namana any an-trano ihany koa. Mba hahazoana ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny fividiananao, ataovy azo antoka fa manao fifampiraharahana ianao.
ary ny dite tiorka dia anisan'ireo entana hafa mendrika vidiana eny an-tsena.
Raha te hanana traikefa mampitolagaga ianao dia tsidiho ity tanàna ambanin'ny tany ity. Naorina teo ambanin'ny havoana fantatra amin'ny anarana hoe Citadel of Kaymakli.
Miditra amin'ny tontolo vaovao amin'ny vanim-potoana manan-tantara ianao rehefa mandeha midina amin'ireo lalantsara feno fotaka tery ambanin'ny havoana. Amin'ny maha-vahiny anao dia afaka mijery tranon'omby, toeram-pambolena divay, lakozia, toerana fitehirizana ary maro hafa ao amin'ny tanàna ambanin'ny tany ianao.
Iza amin'ireo tanàna tsara indrindra hojerena any Torkia?
Ny tanànan'i Torkia no toerana ahafahanao mahita ny fiainana Tiorka amin'ny mazava indrindra. Satria manana fakany fahiny izy ireo tamin'ny maritrano Ottoman, Byzance ary Classical. Ataovy azo antoka ny hampiditra fotoana sasany ao an-tanàna amin'ny dianao. Ireto ambany ireto ny lisitry ny tanàna azonao tsidihina.
Toerana ambony indrindra mpizahatany hitsidika any India! Fantaro eto!
Fiarahamonin'ireo mpifindra monina, voaroaka, mpitsoa-ponenana any Tiorkia
Desambra 15, 2019
Zavatra tokony hatao any Cabo San Lucas
Oktobra 30, 2020
Ny entana Tiorka tsara indrindra hanafatra amin'ny Amazon
Aprily 28, 2022
Ahoana ny fomba fangatahana fialokalofana any Torkia?
Enga anie 9, 2022
Tsy misy toa an'i Aostralia ', tadiavo ny toerana malaza sasany any Aostralia
Toeram-pisakafoanana 10 ao Mexico City
Fampahalalana mahasoa momba an'i Torkia, rohy mahasoa momba an'i Torkia
Febroary 3, 2022
Aostralia Banks Kanada Shina Frantsa Germany mandehana fahasalamana trano fandraisam-bahiny trano India Irak Italia asa Meksika ny vola mpitsoa-ponenana Rosia am-pianarana Espaina fianarana Thailand zavatra vidiana zavatra atao Travel vorontsiloza UK USA rohy mahasoa visa
ALinks manohana ny Asylum Links. Mizara vaovao momba ny dia sy ny fipetrahana any ivelany amin'ny rehetra izahay. Tongasoa eto ny mpitsoa-ponenana!
Kitendry Cookie MANAIKY
Tehirizo & manaiky